परिचय | Nepali Children
म नेपालमा अवतरण गरेको बित्तिकै यसको अवर्णनीय र अक्षय्य सुन्दरता, सरलता र शुद्धताले मलाई चारैतिर घेरा हालें र म मोहित भएँ। यो अनुभव गर्न मलाई लामो समय लागेन, जुन त्यो ठाउँ हो जुन मैले मेरो जीवन भर खोजिरहेको थिएँ। तत्काल मलाई अनुभूति भयो की म यहाँको हुँ। यो मेरो लागि बिलकुल बिल्कुलै भिन्न जीवनको अनुभव गर्न को लागी थियो- मेरो ठाउ बाट धेरै टाढा! इमान्दारी, सरल र सँधै नेपालका मुस्कुराउने अनुहारहरू (थोरै मात्र उल्लेख गर्न) ममा गहिरो छाप पर्न सक्ने अन्य गुणहरू थिए जसले मलाई यहाँ रहन र गाउँका मानिसहरुमा (विशेष गरी निराश्रित र विपन्न बच्चाहरु) सम्म पुग्ने उत्साहित बनायो। नेपाल भ्रमण गर्दै मैले नेपाली आतिथ्य अनुभव गरें, अपरिचितहरूसँग तिनीहरूको आकर्षक र मैत्री तरिका। म यो कहिले भुल्दिन। यी सबै कुराले मलाई यो महसुस भयो कि म सकेसम्म चाँडो नेपालमा बढी समय बिताउन चाहन्छु।
मेरो सपना साकार गर्दै गरिब र असुरक्षित बच्चाहरूसम्म पुग्न सम्भव हुने सम्भावित तरिकाहरू खोज्ने प्रयास गर्न मैले कुनै समय व्यर्थमा गरिन। मैले यसमा आफ्ना नेपाली साथीहरूसँग काम गरें जुनसँग त्यस्तै परियोजनाहरूमा अघिल्लो अनुभव थियो। तर, पहिले सब भन्दा पहिले। हामीले आयका केही भरपर्दो स्रोतहरू निकास गर्ने कुरामा सहमति व्यक्त गरेका थियौं, जसले दुर्गम गाउँहरूमा कम भाग्यशाली र असहाय बच्चाहरूसम्म पुग्ने मेरो सपना साकार गर्न मद्दत गर्दछ। मैले यसबारे नेपाली साथीहरूसँग छलफल गरेँ र धेरै नेपालीहरू आफ्नो आयमा पर्यटकमा निर्भर रहेको पाउँदछन्। त्यसैले हामी ट्रेकिंगहरू आयोजना गर्न विचारको साथ आएका छौं। सबै अन्य ट्राभल एजेन्सीहरूका बीच बाहिर खडा हुनको लागि हाम्रो ट्रेकिंग सेवा विशेष हुनु आवश्यक पर्दछ। नेपालको चारैतिर घुम्दै, मैले आफ्नो सोच राखें र ट्रेकिंग उद्देश्य रोजें। यो मेरो अनुभवमा आधारित छ: मेरो एक ट्रेकिंग को क्रममा मैले पहाडको छेउमा केही साना बच्चाहरूलाई लजहरूमा काम गराएको देखे। यी बच्चाहरूले कठिन परिश्रम गर्दछन् आफ्नो जीविकाको लागि किनभने तिनीहरूका आमा-बुबाहरू सार्है गरिब छन् । यी बच्चाहरूलाई तिनीहरूको बाँकी जीवनमा यो काम गर्नका लागि निन्दा गरिएको छ। म वास्तवमै यी युवा बच्चाहरूलाई मद्दत गर्न चाहान्छु, तिनीहरूलाई सक्षम पार्नको लागि आफ्नै लागि अझ राम्रो अस्तित्व सिर्जना गर्न। मलाई गलत (दुःख) महसुस भयो किनकि तिनीहरूको क्षमता खेर गएको , शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर नपाउदा। म तिनीहरूलाई भविष्य निर्माण गर्न मद्दत गर्न चाहन्छु। मैले यी बालबालिकालाई सहयोग पुर्‍याउन पैसा जुटाउन र सबै नाफा प्रयोग गर्न नेपाली चिल्ड्रेन फाउंडेशन सुरू गरें।
नेपाली चिल्ड्रेन फाउंडेशन
नेपाली बच्चाहरूको जग नेपाली चिल्ड्रेन फाउंडेशन नेपाली शिशुहरूका लागि नेपालीद्वारा सञ्चालित हो। मेरो भूमिका मात्र सहयोगी छ। आधारभूत लक्ष्य गरीब परिवारका बच्चाहरूलाई शिक्षा प्राप्त गर्न सहयोग गर्नु हो। यी परिवारहरूमा, खाना र आश्रयको बदलामा काम गर्न बच्चाहरूलाई लगाउने चलन छ। यसको मतलव उनीहरूले आफैं मेहनत गर्नुपर्दछ र लजमा धेरै लामो समय काम गर्नुपर्दछ। त्यसैले शिक्षाको लागि समय बाँकी छैन। यसको प्रभावले उनीहरूको जीवन परिवर्तन गर्ने कुनै अवसर छैन किनकि तिनीहरू अशिक्षित छन्। तिनीहरू केवल तिनीहरूका आमा बुबा वा उनीहरूको रोजगारदाताको बानीबाट सिक्छन्। तिनीहरू आफ्ना अभिभावक र साथीहरूबाट सहज बानीहरूको बानी पछ्याउँदछन् र नयाँ र उत्तम उपकरणहरू वा कार्य विधिहरूको प्रयोग गरेर उनीहरूको स्थिति सुधार गर्न सोच्ने अवसर कहिल्यै पाउँदैनन्। नेपाली चिल्ड्रेन फाउंडेशनले यी बच्चाहरूलाई विभिन्न स्थानमा थप सकारात्मक कदमहरू बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ, बस्नको लागि ठाउँ, स्वस्थ र पौष्टिक खाना उपलब्ध गराएर , तिनीहरूलाई प्राथमिक र माध्यमिक विद्यालयहरूमा जानको लागि पहुँच पुर्‍याउँछ। नेपाली चिल्ड्रेन फाउन्डेशनले १ — १६ वर्षको उमेरमा उनीहरूलाई आय आर्जन गर्ने पेशा सिकाउन वा विश्वविद्यालयको थप अध्ययनमा भाग लिन सहयोग गर्ने उद्देश्य राख्दछ।
यदि तपाईं चन्दा दिन चाहानुहुन्छ?
यो बैंक खाता प्रयोग गर्नुहोस्: नेपाली बच्चाहरूको नाममा
Nepali Childern Hostel Pvt. Ltd.
Global IME, Pokhara branch
को साथ दान गर्नुहोस् सबै उपहार नेपाली चिल्ड्रेन फाउंडेशनको फाइदाको लागि प्रयोग गरिनेछ।
मिति: 13 10 2077